ဖြေရှင်းနည်းများ 15693 & ISO ကို 18000-3 Long-distance Multiple Antenna Time Attendance Gate, Barrier-free Conference Channel Gate Machine, High Frequency Intelligent Channel Machine, High-frequency Barrier-free Conference Channel Solution, High-frequency Barrier-free Personnel Channel Gate Attendance Solution, High-frequency Barrier-free Staff Attendance Channel Gate Solution, High-frequency Barrier-free Staff Channel Attendance Solution, Long Distance Access Control Attendance Machine, Long-distance High Frequency Multiple Antenna Gate, Staff Accessibility Attendance Channel Machine
Supports multiple chip manufacturers' RFID electronic tags that comply with ISO/IEC15693 and ISO18000-3 standards protocol; channel identification distances up to 1.2 မီတာ.
standard protocol: က ISO / IEC15693 နှင့် ISO18000-3
လေးစားလိုက်နာခြင်းကဒ်: NXP ငါ CODE2, TI, ST
input ဗို့: AC အ 100-240V
အလုပ်လုပ်လက်ရှိ: < 5တစ်ဦးက
RF ပါဝါ: < 1-8W က (သင့်အောင်လုပ်နိုင်သော)
အလုပ်လုပ် mode ကို: host က mode ကို / scan mode ကို / channel mode ကို
ဆက်သွယ်ရေးအင်တာဖေ့စ: RS232 / RS485 / Wiegand interface နဲ့ TCP / IP (optional ကို)
အနီအောက်ရောင်ခြည် sensing: အနီအောက်ရောင်ခြည်သုံးစုံ
အများဆုံးဆက်သွယ်ရေး baud rate ကို: 38400 bps
ကတ်များအထွတ်အထိပ်မြန်နှုန်း: > 100PC များ / sec
အသိအမှတ်ပြုမှုအကွာအဝေး: 1-120စင်တီမီတာ (dual-အင်တင်နာ)
အမေရိကန်, ကနေဒါနှင့် U.S အောက်ပါအခြားသောဒေသများ. FCC သည်
ဥရောပနှင့် ETSI မာခ်အောက်ပါအခြားသောဒေသများ 302 208 နှင့် & LBT စည်းမျဉ်းများမပါဘဲ
antenna အသွင်အပြင်: (အရှည်က x အကျယ် x ကိုအမြင့်)1556x509x72mm, အခြေစိုက်စခန်း(အရှည်က x အကျယ်): 545x180mm
ထုပ်ပိုးအရွယ်အစား: 160x64x23cm အပိုင်းအစ
အလေးချိန်: 25kg / အပိုင်းအစ (အထုပ်အလေးချိန် 50kg နှင့်အတူနှစ်ဆတံခါး set ကို)
ခန္ဓာကိုယ်ပစ္စည်း: acrylic နှင့်စာရွက်သတ္တု
သိုလှောင်ခြင်းအပူချိန်: -20℃ ~ + 85 ℃
operating စိုထိုင်းဆ: < 95% @ + 25 ℃
This FA-253 series access control device supports reading multiple manufacturers' RFID tags conforming to ISO/IEC15693 and ISO18000-3 standards; the channel identification distance can be up to 1.2 မီတာ (the recognition distance is related to the performance, size and on-site environment of the tag). This series of products can be widely used in accessibility conference sign-in, exhibition/concert/stadium/ordering conference and other access control systems, large factory enterprise access control attendance system.
2. Can integrate two-dimensional single-door two-way or two-door two-way controller and access controller (optional ကို);
3. Withavariety of communication interfaces: RS232 / RS485 / Wiegand interface နဲ့ TCP / IP (optional ကို);
5. Using industrial grade design, can work in low temperature environment, ရေစိုခံ, dustproof, lightning protection, anti-static design;
နောက်တစ်ခု: လက်ဗွေရာကို LED Lighting စမတ်စောင့်တပ်ဖွဲ့ခရီးစဉ်စနစ်
RFID မြေအောက်ပိုက်လိုင်းသတ်မှတ်ခြင်းဖြေရှင်းချက်, ရေနံဓါတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းများ, cable, မြေအောက်နက်စွာသော induction 1.8 မီတာ